घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू एन्जिल कोरिया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “सानो परी“। हाम्रो लेखले तपाईंलाई एन्जिल कोरिया बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज प्रदान गर्दछ जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
एंजेल कोरियाको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: पेसेफुटबोल र गोल।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको हमला गर्ने स्थितिगत भूमिकाको बारेमा- कि राम्रो सीप, तेज र कम गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र। यद्यपि, केवल थोरैले एन्जिल कोरियाको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एन्जिल कोरिया बचपन कहानी- उसको प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, एन्जेल मार्टिन कोरिया मार्टिनेज मार्च १91995 March को मार्चको नौौं दिनमा अर्जेन्टिनाको रोजारियो शहरमा जन्म भएको थियो जहाँ ताराहरू मनपराउँदछन् लिओनेल मेस्सी, मौो आईकार्डकार्ड र एन्जिल डि मारिया बाट पनि असिना। कोरिया धेरै बच्चाहरूमध्ये एक हुन् जसको आफ्नो सानो चिनिएको आमा र उनको बुबाको बारेमा धेरै ज्ञात छ। तल एन्जल कोरियाका अभिभावक मध्येको एक दुर्लभ तस्विर हो- उसको आमा.
एन्जिल कोरियाका एक आमा-बुबालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जे होस्, यो स्पष्ट छ कि ऊ एक अर्जेन्टिनी देश हो र थोरै ज्ञात परिवारको मूलको साथ मिश्रित जातीयता हो। के तपाईंलाई थाहा छ युवा कोर्याया लास फ्लोरस नजिकै रोजारियोको छेउमा हुर्केका थिए जहाँ उनी हुर्किसकेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको बारेमा धेरै चिनेकै थिएनन्।
उनी लास फ्लोरस नजिकको रोजारियोमा हुर्केका थिए। छवि क्रेडिट्स: वर्डअटलास र पेशनफुटबोल।
लस फ्लोरस छिमेकमा कम वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केकी, कोरियाले छिमेकीमा गरिबीको प्रारम्भिक जीवन बिताए जहाँ उनी या त एक लागू पदार्थ दुर्व्यसनी वा दोषीको रूपमा समाप्त हुन सक्ने सम्भावना बढी थियो।
एन्जिल कोरिया बचपन कहानी- उहाँको शिक्षा र क्यारियर निर्माण
यद्यपि, कोरियाले सडक फुटबलमा डुबेको र आफ्नो तत्कालीन स्थानीय बाल्यकाल क्लबहरू - एलिआन्जा खेल र टिरोको साथ क्यारियर निर्माण कार्य गरेर उनको वरपरका कठोर वास्तविकताबाट भाग्नको लागि सक्षम भयो।
कोरिया १२ बर्षको उमेरमा, उसले आफ्नो बुबाको समर्थन गुमाउँदा दुई जना दाजुभाइ गुमाउँदा उनी झनै कठोर वास्तविकताबाट प्रभावित भए। जे होस् पीडा कोरियालाई धेरै नै सहन पर्थ्यो, तर उनले के गरे उनलाई राम्रो गर्ने थाहा थियो; फुटबलको बाटोबाट सान्त्वना खोज्दै।
"जब म खेलको पिचमा जान्छु, म सबै दुःखलाग्दो वास्तविकताहरू बिर्सन्छु जुन मलाई घेरिएको छ र मलाई केवल खेल्न रमाईलो लाग्छ,"
एन्जिल कोरिया बचपन कहानी- उसको प्रारम्भिक क्यारियर जीवन
भाग्यवस, कोरिया फुटबलको साथ भाग्नका लागि मात्र राम्रो थिएनन् तर बलमा उत्कृष्ट सीपहरू थिए, जुन २०० San मा सान लोरेन्जोको युवा प्रणालीमा उनको नामांकन देखिएको थियो जुन क्लबको स्काउट्स मध्ये एकले फेला पारे पछि।
क्लबको स्काउट मध्ये एकले उनलाई फेला पारे पछि उसलाई सान लोरेन्जो ल्याइएको थियो। छवि क्रेडिट: PassionFutbol।
यो अर्जेन्टिनी पक्षको साथ हो कि कोरियाले आफ्नो कौशलता र प्रशिक्षणको सम्मानमा years वर्ष बिताए जसले उनलाई दक्षिण अमेरिका महादेशको पार गर्थे। २०१'s मा क्लबको पदयात्रामा उनको उदय उल्कास्पद थियो जब उनले क्लिकको उपनाम भएको क्लबको लागि व्यवसायिक शुरुआत गरे।
एन्जिल कोरिया जीवनी- उहाँको फेम कहानी
एक बर्ष पछि, कोरिया तत्कालीन ला लिगा होल्डर एटल्टिको म्याड्रिडसँग हस्तान्तरण सम्झौतामा सहमत भए। दुःखको कुरा यो कुरा पत्ता लाग्यो कि उनको हृदय ट्यूमर छ जब स्पेनिश पक्षमा उनको चाल पूरा गर्न मेडिकलहरू गर्दा।
उसको मुटुको शल्यक्रियाले उनलाई घटनाबाट टाढा राख्यो जुन उसले लामो समयदेखि भाग लिने आशा गर्‍यो। छवि क्रेडिटहरू: ट्विटर र पेसनफुटबोल।
हो, ट्यूमर सफलतापूर्वक शल्य चिकित्साको माध्यमबाट हटाइएको थियो, यो लागतमा आयो कि कोरेया सेन लोरेन्जोको साथ कोपा लिबर्टाडोरसको सेमीफाइनल र फाइनलमा हराएकी थिइन। ती खेलहरू हो जुन उनले सँधै खेल्ने आशा राखेका थिए किनभने उसले आफ्नो टीमलाई अन्तिम चरणमा पुग्न मद्दत पुर्‍यायो।
एन्जिल कोरिया जीवनी- उहाँको उदय कथा फेम
जब कोरियाले पूर्ण पुन: प्राप्ति गरे, उनले १ officially डिसेम्बर २०१ 13 मा आधिकारिक रूपमा एटेल्टिको म्याड्रिडमा सामेल भए र केही वर्षमै क्लबको सबैभन्दा भरपर्दो फोरार्डहरूमध्ये एक बन्नको लागि उनले काम गरे।
कसले एट्लिटिको म्याड्रिडमा एक प्रमुख अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो मार्गमा काम गरेको छ हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: मार्का।
अर्जेन्टिनीको राष्ट्रिय टोलीसँग उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियरमा पनि कमी पाएनन् जहाँ उनी प्रायः आफ्नो देशवासीसँग तुलना गरिन्छ सर्जियो अगुरो जब उसको खेलने शैली बढी मिल्दोजुल्दो छ कार्लोस Tevez। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
एन्जिल कोरिया जीवनी- प्रेमिका, पत्नी, र बच्चा
कोरियाको प्रेम जीवनमा अघि बढ्दै, त्यहाँ अगाडि डेटि history इतिहासको बारेमा धेरै ज्ञात छैन किनकि उसले त्यस विभागमा हुने घटनाहरूको बारेमा धेरै कुरा प्रकट गरेको छैन। जस्तो कि, यो निर्णायक रूपमा भन्न सकिदैन कि उसको विगतमा प्रेमिका थियो वा न लेख्ने समयमा श्रीमती छ। तर, अनुसार WTFoot, त्यहाँ एक रहस्य पार्टनर साब्रिना डि मार्जो अवस्थित छ जसले एन्जिल कोरिया गर्लफ्रेंड र उनकी छोरीकी आमा हुनलाई अफवाह गरे।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, एन्जिल एक प्यारी छोरी लोलिताका अभिभावक हुन् जो उनको प्रेमिका वा पत्नीद्वारा उनी जन्माइन्। उसको इन्स्टाग्राम खाता लोलिताको फोटोहरूले भरिएको छ जुन वास्तवमै द्रुत र खुसी हुँदै गइरहेको छ। बढी के? सुन्दर केटीले आफ्ना बुबासँग समय बिताउन मन पराउँछन् जसले उनको कम्पनी पनि रमाउँदछन्।
एन्जिल कोरिया आफ्नी छोरीलाई माया गर्छिन् र प्रायः उनीसँग गुणस्तरीय समय बिताउँछिन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एन्जिल कोरिया जीवनी- पारिवारिक तथ्यहरू
यसले भन्यो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति भाग्य खोज्न घर जान्छन् र परिवारलाई साझा गर्न घर फर्किन्छन्। एन्जिल कोरियाको बारेमा पनि त्यस्तै भन्न सकिन्छ जो उनको परिवारका रोटी खाने नोकर हुन्। हामी तपाईं कोरीयाको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा उसका आमा बुबाआमाबाट जानकारी ल्याउँदछौं।
एन्जेल कोरिया बुबाको बारेमा: कोरियाले आफ्नो सानो चिनिएका बुवालाई मृत्युको चिसो हातमा हराए जब उनी १२ वर्षको मात्र थिए। यद्यपि अगाडि उनले आफ्नो बुबाको मृत्युको कारण पत्ता लगाएको छैन, तर उनले मृतकलाई प्रशिक्षणको साथ आफ्नो बाल्यकालको सबैभन्दा खुशीको स्मृति दिएका छन्।
Gelngel Correa आमाको बारेमा: के तपाईंलाई थाहा छ कोर्यायाको थोरै ज्ञात आमा असंख्य हेरचाह गर्ने आमाहरू मध्ये एक हो जसले साबित गर्‍यो कि प्यारेन्टिंग भनेको बलिदानको बारेमा मात्र हो? उनले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु पछि अगाडि र आफ्ना भाइबहिनीहरूलाई हुर्काउन मद्दत गर्छिन्। वास्तवमा, कोरियाकी आमाले आफ्ना बच्चाहरूले भरेका चीजहरू सुनिश्चित नगरेसम्म खाँदैनन्। उनी विशेष गरी कोरियामा गर्व छिन् जसले १२ वर्षको उमेरदेखि परिवारको पालनपोषणको लागि पे डाइम दिएर रोटी खाने व्यक्तिको जिम्मेवारी लिएका थिए।
आफ्नो आमा संग एन्जिल Correa को एक दुर्लभ तस्वीर। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एन्जल कोरिया भाई बहनहरूको बारेमा: यस फरवार्डमा धेरै भाई बहिनीहरू छन्। १० धेरै पहिले उसले आफ्नो बुबाको साथमा हराएकी थिइन् जबकि अरु केटाहरु को लागी विश्वास गरिन्छ। यो तथ्य यो छ कि कोरेयाले जहिले पनि आफ्नी आमा र भाइहरूको लागि अन्तर्वार्तामा बहिनीहरूको उल्लेख नगरी कुरा गर्ने गर्दछ। तल हामीले फेला पारेका एन्जिल कोरियाको परिवारको नजिकको इकाई छ।
एन्जिल कोरिया उनकी आमा र उनका भाइहरूसँग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एन्जल कोरिया आफन्तहरूको बारेमा: एन्जिल कोरियाको पारिवारिक जीवनबाट धेरै टाढा, उसको पुर्खा र परिवार जराको बारेमा त्यति धेरै ज्ञात छैन, विशेष गरी यो उहाँका बुवा र बुवाआजाहरूसँग सम्बन्धित छ जबकि उनका काका, बुबुआ, काका, भान्जा र भतिजाहरू लेख्नको लागि अझै चिनिन सकेका छैनन्। यो बायो
एन्जिल कोरिया जीवनी- व्यक्तिगत जीवन फुटबलबाट टाढा
सबै मानिसजस्तै एन्जिल कोरियाको व्यक्तित्व स्वभाव पनि छ जसले परिभाषित गर्छ कि ऊ वास्तवमा कसलाई खेलको पिचबाट बाहिर छ। मीन राशिफल चिन्ह द्वारा व्यक्तिगत निर्देशित द्वारा साझेदारी गरिएको लक्षणहरूमा अगाडिको संवेदनशील स्वभाव, भावनात्मक हिसाबले संचालित प्रकृति र स्पट-अन अन्तर्ज्ञान समावेश गर्दछ।
कोरिया जसले सायद आफ्ना निजी र व्यक्तिगत तथ्यहरूको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्दछ केही गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन उसको चासो र रुचिलाई पार गर्दछ। ती भिडियो भिडियो खेल खेल्न, यात्रा र आफ्नो परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय खर्च सहित।
भिडियो गेमहरू खेल्नु भनेको अगाडिको रुचि हो। उनकी छोरी पनि समान शौक साझा। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एन्जिल कोरिया जीवनी- उसको जीवनशैली
एन्जिल कोरियाको पैसा कमाउने प्रयास र खर्च गर्ने बानीको कुरा गर्नुहोस्, उसले धेरै तलब, ज्यालामा, र शीर्ष उडान फूटबल खेल्नको लागि बोनस जितेर कमाउँछ, जबकि उसको सम्पत्तीको स्थिर वृद्धिमा समर्थनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,
यस प्रकार, यस बायो लेख्ने समयमा $ 3.50० मिलियन भन्दा बढीको कुल सम्पत्ति भएको अगाडि। उनीसँग जे छ यो एक विलासी जीवनशैलीको रूपमा लिन्छ जुन खेलका शीर्ष आम्दानीहरू समावेश गर्दछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर र पल पोगाबा.
कोरियाको अनुमानित नेट वर्थ $ million मिलियन भन्दा बढीले शीर्ष उडान फूटबल खेल्ने आकर्षक प्रकृतिको राम्रो बोल्छ। छवि क्रेडिट: Pho.to.fun।
एन्जिल कोरिया जीवनी- उसका अनटोल्ड तथ्यहरू
हाम्रो एन्जिल कोरिया बाल्यकाल कहानी र जीवनी को अन्त को लागी, यहाँ अगाडी को बारे मा कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरु छन्।
तलब ब्रेकडाउन: सेप्टेम्बर २०१ at मा, एट्लिटिको म्याड्रिडसँग अर्जेन्टिनाको सम्झौतामा उसले ठूलो तलब जालिरहेको देख्यो M. M मिलियन यूरो प्रति वर्ष। एन्जिल कोरियाको तलब संख्यामा क्रunch्च गर्दै, उसले निम्न कमाउँछ।
एन्जिल कोरिया वेतन ब्रेकडाउन। क्रेडिट: WTFoot
यहाँ, हामी एन्जल कोरियाको तलब (२०१ 2018 को आंकडा) प्रत्येक सेकेन्डमा वृद्धि गरी सकेका छौं।
तपाईले यस पृष्ठलाई हेर्नु भएको छ त्यसैले एन्जिलले कति कमाए।
यदि माथिको संख्या बढेको छैन भने यसको मतलब यो हो कि तपाईं ए बाट हेर्दै हुनुहुन्छ AMP पृष्ठ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ एन्जल कोरियाको तलब आय प्रति सेकेन्ड हेर्न. तपाईंलाई थाँहा थियो?… यसले युरोपमा औसत कामदार कम्तिमा .8.6..XNUMX बर्ष लिन सक्दछ स्वर्गदूतले १ महिनामा कमाउँछ।
धर्म: एन्जिल कोरियाका अभिभावकहरूले उनलाई इसाई धर्मको विश्वासको पालनमा हुर्काए। फुटबलर एक अभ्यास क्याथोलिक हो धेरै व्यक्ति अर्जेन्टिनामा रोजारियोमा जन्म। वास्तवमा, पोप फ्रान्सिस हुनु अघि उनको अर्जेन्टिनामा जर्ज मारियो बर्गोग्लियोसँग भिडन्त भएको थियो।
एन्जिल कोरिया तब कार्डिनल जर्ज मारियो बर्गोग्लियोको साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
ट्याटूहरू: कोरिया स्पष्ट रूपमा ट्याटूमा ठुलो छ र उसको घाँटी, छाती, हतियार र खुट्टामा शरीर कला छ। ऊ अझ कति आर्ट्स पाउँदछ भन्ने कुराको अन्त्य छैन जहाँ अझै अझ ठाउँ छ।
FIFA रेटिंग्स: एन्जिल कोरियाको समग्र FIFA रेटिंग्स यो बायो लेख्ने समयमा over२ भन्दा माथि छ। यद्यपि रेटिंगहरू विगतका वर्षहरूमा सुधारहरू भए पनि, फ्यानहरूले उहाँलाई फिफा क्यारियर गेमप्लेका लागि सेवाहरू सुरक्षित गर्ने दृष्टिकोणले 82 87 को समग्र मूल्या rating्कन प्राप्त गर्नका लागि कुर्दैन।
तपाईं आफ्नो ट्याटू को अर्थ बनाउन सक्नुहुन्छ। छवि क्रेडिट: WTFoot।
धुम्रपान र मदिरा: कोरिया धूम्रपानको लागि दिइएन न त ऊ पिइरहेको देखियो। धेरै फुटबल प्रतिभाहरु जस्तै, उनी आफ्नो स्वास्थ्य बारे चिन्तित छन् र यसमा सम्झौता गर्न केहि पनि गर्दैनन्।
एन्जिल कोरिया जीवनी- उहाँको विकी नलेज बेस
एन्जिल कोरियाको जीवनी तथ्यहरूको यो अन्तिम खण्डमा तपाईले आफ्नो विकी ज्ञानको आधार देख्नुहुनेछ। तल चित्रण गरिएको, यसले तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी पाउन मद्दत गर्दछ सानो परी संक्षिप्त र सजिलो तरीकामा।
एन्जिल कोरिया पूरा नाम एन्जेल मार्टिन कोरिया मार्टिनेज
एन्जिल कोरिया जन्म मिति मार्च,, १91995 ((लेखनको समयमा उमेर २ 24)
एन्जिल कोरियाको जन्म स्थान रोजारियो, अर्जेन्टिना
एन्जिल कोरियाका अभिभावकहरूको बारेमा उसको बुवा ढिलो छ र उनको आमा जीवित छ (लेखेको समयमा)।
एन्जिल कोरियाको छोरीको नाम लोलिता कोरिया
एन्जिल कोरियाको धर्म ईसाई धर्म (क्याथोलिक अभ्यास गर्दै)
एन्जिल कोरियाको फिफा रेटिंग 81१ को सम्भावितताको साथ (फेब्रुअरी २०२० मा)
एन्जिल कोरियाको उपनाम सानो परी
एन्जिल कोरियाको प्रेमिकाको नाम (अफवाह) साब्रिना डि मार्जो
एन्जिल कोरियाकी पत्नीको नाम (अफवाह) साब्रिना डि मार्जो
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एन्जिल कोरिया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या Fac्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।